လူငယ် စာပေဝါသနာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာရန်နှင့် ရသစာပေကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာရန် ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ?? - Yangon Media Group
လူငယ် စာပေဝါသနာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာရန်နှင့် ရသစာပေကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာရန် ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ??
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ ပိတောက်လမ်း၌ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် စာပေနှင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗ.က.သ) ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၉/၂ဝ၁၇) အရ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် စာပေကော်မတီအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်းပြီး အိပ်မက်တို့ရဲ့..လမ်း(စာဖတ်ဝိုင်း) ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်ကနေစပြီး ကျင်းပမှာပါ။ အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ တိုင်းလုပ်သွားမှာပါ။ အဲဒီမှာ စာဖတ်ဝိုင်း(၁) ဖွင့်ပွဲနဲ့ ရတနာပုံတက္က သိုလ်ရော အခြားတက္ကသိုလ်အသီးသီးကပါ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ ပေးပို့လာတဲ့ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးတွေ ဖော်ပြပေးမယ်၊ ခြေရာများ (၁) စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေသွားမှာပါ”ဟု စာပေကော်မတီမှ အယ်ဒီတာချစ်စိုး (ဒဿနိက) ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါစာဖတ်ဝိုင်းကို အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲမှ ညနေ ၃ နာရီထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ကဗျာရွတ်ပွဲများ၊ ဝတ္ထုတိုဖတ်ပွဲများ၊ ဆောင်းပါးဖတ်ပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့် စာပေနှင့် ပတ်သက်သောလှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ရသစာပေကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာရေး၊ တက္ကသိုလ်အသီး သီးမှ လူငယ်စာပေဝါသနာရှင်များပေါ် ထွက်လာရေး၊ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူ စာဖတ်သူဦးရေများပြားစေရေးနှင့် ရွက်ပုန်းသီးစာရေးသူများ စုစည်းညီညွတ်ပြီး အားကောင်းသော စာပေလှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာစေ ရန်ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
”သီချင်းခွေ ထုတ်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး အရင်းလောက် ပြန်ရရင်ကို အလုပ်လုပ်ရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ အလုပ??